Ukwakheka nezifundo isayithi elivela ngonyaka ka-2010 elihlose ukugcina abafundi balo benolwazi ngezinto zakamuva izindaba, izinguquko nezingcingo wohlelo lwezemfundo. Iningi kakhulu le- ukuphikisana kanye nezihloko zaseyunivesithi nezesikole, zokuthi ungayenza kanjani inqubo ethile yezokuphatha ngezinsizakusebenza kanye nemihlahlandlela yabafundi.
Konke lokhu kungenzeka ngenxa yethimba lethu lokuhlela ongabona ngezansi. Uma ufuna ukuba yingxenye yaleli qembu, ungaxhumana nathi lapha. Ngakolunye uhlangothi, ku leli khasi Ungathola zonke izihloko esizifakile kuleli khasi eminyakeni edlule, zihlelwe ngezigaba.
Abathweswe iziqu kanye noDokotela Wefilosofi wase-University of Navarra. Inkambo Yesazi Kokuqeqesha e-Escuela D´Arte Formación. Ukubhala nefilosofi kuyingxenye yomsebenzi wami wobuchwepheshe. Futhi isifiso sokuqhubeka nokufunda, ngophenyo lwezihloko ezintsha, sihamba nami nsuku zonke.
Ukufunda akwenzeki, kepha kunalokho kukuvumela ukuba ube lapho ufuna khona. Ngoba ukuqeqeshwa okuhle kuvula yonke iminyango oyifunayo. Akukaze kwephuze kakhulu ukuqhubeka nokufunda! Ngalesi sizathu, kuFomaciónyEstudios sifuna ukuthi ukwazi ukufeza zonke izinhloso zakho ngolwazi oluhle.
Bengihlale nginentshisekelo ekuqeqesheni nasekuqondiseni amakhono (FOL) futhi emsebenzini wami ngidlule ezifundweni ezihlobene nalokhu. Ngaphezu kwalokho, izindlela zokufunda zokufunda yinto engihehile, ikakhulukazi ukufundisa izingane ukufunda.
IVintage '84, imbongolo engaphumuli enesihlalo esibi futhi enokuthanda okuningi nokuzilibazisa. Ukuthola ulwazi olusha ezifundweni kungenye yezinto engizibeka phambili: awuyeki ukufunda. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungathuthuka kanjani ezifundweni zakho? Ezindabeni zami uzothola amathiphu amaningi, ngiyethemba, azokusiza ukuthuthukisa ukuqeqeshwa kwakho.